OBN : Faayidaa Addaa Finfinneerraa Oromiyaan argattuu. | Kichuu
OBN : Faayidaa Addaa Finfinneerraa Oromiyaan argattuu.
OBN Afaan Oromoo’s video-Faayidaa Addaa Finfinneerraa Oromiyaan argattuu.
Dr Warqinaa, dhimma Finfinnee irratti dhugaa Oromoon yeroo hunda himachaa ture dubbachuu keessaniif galatoomaa. Garuu yeroon kan jechaa osoo hin taane kan gochaati. Dhimmi Finfinnee kan koreen Hojii Raaw’achiiftuu OPDO fi Kaabineen qofti murteessanii milkeessan akka hin taane dogongora tibba darbee irraa barattan jennee abdachaa turre. Dhimma Finfinnee waan laayyotti moo’atamuu miti. Waan qaamni hundi itti hirmaatee bilcheessuun barbaachisuudha. Ammas sadarkaa hoggansa muraasaatti qaburra
1) Hayyoonni Oromiyaan qabdu yunivarsitiilee hunda keessatti qorannaa cimaa dhiheessuun haa bilcheessan
2) Caffeen Oromiyaa yaada bilchaate kana sirritti mari’atee ejjannoo Oromiyaafi Oromoo akka ta’etti raggaasisuun mana maree federaalaatiif haa ergu.
3) Miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii Paarlaamaa Federaalaa keessa jiran ejjannoo tokkoon ibsa gahaa miseensota biraatiif haa laatan.
Akkanaan furmaanni waaraa dhimma kanaaf dhufuu danda’a. Akkanaan deemanaan gara siyaasaatifi gara seeraatinis humna guddaa horachuu dandeessan. Kana dhiiftanii akkuma dura Ihaadegaawi aseraraa deemna jennaan ‘ waalessaa malee deemtee geggeessaa malee galtee’ san taatanii salphattanii nus salphiftu.
Use the totality of the institutional, popular and legal muscle at your disposal. The so called democratic centralism whereby decisions are made at the top is designed to help the minority oligarchy that lacks wider base and valid legal argument.